Afrika : Ndao Resahana ny Fifidianana Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Afrika : Ndao Resahana ny Fifidianana Ao Etazonia
Nandika (fr) i Flore Souchet
Voadika ny 26 Mey 2018 3:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, اردو, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Oktobra 2008)
Mazava ho azy fa mahaliana olona betsaka tokoa ny fifidianana hataon'ny amerikàna tsy ho ela, ary mahaliana ny ho anjara toerana raisin'ny teknolojia ao anatin'io adihevitra io. Vao haingana namoaka fampiasa iray ny The Economist, Kolejy Iraisampirenena momba ny Fifidianana, izay hahafahan'ny tsirairay manerana izao tontolo izao haneho ny hevitr'izy ireo miaraka amin'ireo amerikàna mpifidy amin'ny Novambra. Mazava loatra fa tsy ho isan'ny isaina akory ny vaton'ireny mpifidy avy any ivelany ireny, saingy hahaliana ny hahafahana mampitaha azy ireny amin'izay tena ho vokatry ny fifidianana.
Voarohy manokana amin'ireo fifidianana hoavy ao Etazonia ireo i Afrika raha toa ka ifotorana ny adihevitra tamin'ny Zoma 26 Sept 2008 nifanatrehan'ireo mpirotsaka hofidiana ho filoha (izay saika tsy tanteraka). Ilay vehivavy bilaogera sy mpiara-manorina ny Ushahidi, Ory Okolloh, dia mandrisika ireo Amerikàna hisaintsaina marina tokoa ny safidin'izy ireo sy izay mety ho vokany, amin'ny fandraisana anjara amin'ilay Tetikasa “Ry Amerikana Mpifidy Malala”:
“Ry Amerikana Mpifidy Malala” dia manasa anareo handray anjara amin'ny adihevitra erantany, amin'ny fanolorana valinteny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ho an'ilay fanontaniana, “Inona no tokony hosaintsainin'ireo Amerikàna rehefa mifidy ?” (Huuum… raha hifidy an'i McCain ianao…Veloma ry Etazonia, Arahaba ry Rosia sy Shina).
Lazain'i Blackyard fa nanome tombony kely ho azy teny anatin'ireo tsapa hevitra nataon'ny Gallup ny zavabitan'i Barack Obama nandritra ilay adihevitra. Everest Chiali no mamintina ireo adihevitra tamin'ny teny Swahili nisy nandritra iny alina tontolo iny [amin'ny teny swahili]
Fa misy ihany koa zavatra hafa mahavaky loha. Heverin'i Siasa Duni fa miharitra tsy fisianà mangarahahara ny lisitr'i McCain-Palin ary manontany tena izy raha toa i Sarah Palin ka tsy tsara aron'ny fitsirihana amin'ny antsipirihany nataon'ireo mpanolotsaina azy, izay mahafantatra fa tsy mbola vonona ny hiatrika fanontaniana henjana manoloana ireo mpanao gazety izy. Marina manokana io nanomboka tamin'ny iray amin'ireo tafa voalohany goavana nataony tamin'ny fahitalavitra (niaraka tamin'i Katie Couric, ilay mpanolotra amin'ny fahitalavitra). Niteraka fipoahana kiana ilay fandaharana: nanatsaratsara ny lasany teo amin'ny sehatry ny diplaomasia naha-governoran'i Alaska azy i Palin.
Mba hanamaivanana ny fiantraikany taorian'ilay Hail Mary an'i Rtoa Palin, noferan'ireo mpikarakara ny fampielezankevitry ny repoblikàna ny fandraisany anjara aminà hetsika iarahana amin'ny media, taorian'ny fandinihana antsipirihany. Mahazo alàlana hametraka fanontaniana aminy ireo mpanao gazety, saingy tsy tafapetraka mihitsy amin'ny toeran'ny tokony hamaly velively izy. Tato anatin'ny iray volana farany, roa monja ireo mpanao gazety voatahy manokana afaka nanatona an-dRtoa Palin, nisy ny tafa niteraka resabe nifanaovana tamin'i Charles Gibson avy amin'ny ABC News, izay nitandrina fatratra nitsongotsongo an'i Rtoa Palin. Tsy nahasakana an-dRtoa Palin hampiseho ny fahatakarany ireo fifandirana iraisam-pirenena, rehefa napetrany taminy ny fanontaniana iray momba ny Fotodàlan'i Bush ary ny fandikàny (ny hoe mba ho fisorohana, azon'i Amerika atao ny manao fanafihana firenena hafa heveriny fa loza mitatao ).
Angry African (Afrikàna tezitra) dia mampitaha ny tranga ankehitriny misy an'i Amerika aminà andian-jiolahy mampihorohoro ny manodidina azy:
Dia izay izany, nanana bandy somary mitapy ianareo, saingy tianareo ny hifanila vodirindrina aminy mandritry ny kitonotono hena iray. Tsy antony tsara iray hifidianana azy izany, saingy izay e, izany ianareo rehetra. Nieritreritra ianareo hoe : “Dia mampaninona anefa izany e?”. O ry akama a!, tena nampaninona, Nanomboka niady tamin'ireo vondrom-piarahamonina nanodidina azy lery, na dia tsy nanao na inona na inona taminareo aza ireo. Oh, mafy fiteny ry zareo, saingy fantatrareo fa marefo tsy hahavita firy akory ny vondrom-piarahamoniny. Saingy na ahoana na ahoana, natombok'i lery ihany ny ady. Raha tokony hoe ireo bandy izay manohy mitoraka baomba ny fefinareo no tadiaviny. Nanomboka nandreraka anareo ny gidragidra ary nanomboka simba ny toerana. Nanomboka nitriatriatra ny trano, maty ireo jiro haingon-dàlana, lasa tsy azo nandehanana ny làlana. Raha fehezina, tsy toy ny taloha intsony ilay vondrom-piarahamonina kelinareo. Ary mitovy hevitra ny rehetra amin'ny filazàna hoe tena mampivarahontsana tokoa ilay bandy io. Tsy ho avy intsony izy amin'ny kitonotono manaraka. Fotoana izao hifidianana olona hafa mba hanao fampisehoana sy hamerina ny zavatra rehetra ho amin'ny laoniny.
Araka izany, bandy roalahy no tonga avy any mba hofidianareo. Ny iray tsy dia mitovy loatra aminareo, somary tanora, milaza aminareo hoe ananany daholo ireo hevitra goavana ho entina mandamina ny zavatra rehetra, fa miteny koa izy hoe mila mitondra ny anjara birikinareo koa ianareo mba hampandeha tsara an'izany. Efa mety ho somary kivy lery ankehitriny